Ihe ize ndụ nke ìgwè ehi na ebo dị iche iche | Martech Zone
Saturday, December 31, 2011 Mọnde, Febụwarị 8, 2016 Douglas Karr
Enwere akwụkwọ ole na ole m gụrụ nke nwere mmetụta dị ukwuu na mmetụta m banyere andntanetị na ahịa n'ozuzu ya. Otu n'ime akwụkwọ ndị ahụ bụ Akara Earl's Otu ìgwè: Otu esi agbanwe Omume Mass site na ijikọta Ezi Truedị Anyị ma nke ozo bu nke Godin Agbụrụ: Anyị chọrọ ka ị duru anyị.
Otutu okwu banyere igwe mmadu na nke ebo bu nke oma… ndi ndu a tụlere (dika Godin nke TED vidiyo) dị egwu ma na-akpali akpali. Abụ m onye kwere ekwe nke igwe na agbụrụ, mana abụkwa m onye nwere nchekwube n’omume ndị mmadụ ma a bịa n’ìgwè ehi na agbụrụ. Akwụkwọ ndị ahụ na vidiyo niile na-ekwu okwu mgbe ndị isi nwere ike ijikwa ìgwè ehi ahụ nke ọma… mana ha na-eleghara akụkụ gbara ọchịchịrị nke ìgwè ehi ahụ anya.
Ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abụkarị ihe onye ọ bụla na-ezere na blọọgụ ahịa na teknụzụ, mana m ga-arụ ụka na ịre ahịa na ịmịnye teknụzụ nwere ihe nile iji ikike nke onye ịzọ ọkwa ọchịchị merie ma ọ bụ tufuo ntuli aka. Ekwenyere m na ahia na teknụzụ bụ ihe meriri Ntuli aka 2008 ma tinye President Obama na White House.
Laghachi n'ìgwè ehi. Enwere nsogbu abuo na ìgwè ehi:
Ndudue Ndú - Oge ụfọdụ, ndị kacha adọrọ adọrọ, onye nwere ọgụgụ isi, onye kachasị maa mma ma ọ bụ onye kachasị ogologo n’ime ụlọ adịghị mma, mana anyị na-esokarị ha mgbe ọ bụla.
Ndị Na-eso ụzọ Na-erube isi - Mgbe ụfọdụ, nrube isi na-esite n'egwu ma bụrụkwa nke amaghị ihe.
Ihe kpaliri blog post bụ ọnọdụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke mba ahụ ugbu a. Were dịka ọmụmaatụ, President Obama. Otu n'ime ụda ụda anyị na-anụ ugbu a na nke ga-aga n'ihu na-aga n'ihu na ntuli aka bụ na Onye isi ala Obama kwuru Ndị America dị umengwụ. A ghaghi ikwughachi ihe eweputara ma ekwuputala ya na azụmaahịa ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụla, mkparịta ụka ma ọ bụ arụmụka. Agbanyeghị na etinyere ya site n'okirikiri, ndị isi aka nri iji ọnụego ha na ìgwè ehi ha na-aga n'ihu na-eme ka echiche ahụ bụrụ na Obama kwenyere n'ezie na ụmụ amaala anyị dị umengwụ. Nke ahụ abụghị ihe o kwuru.
Tupu ịmalite ịmalite iche naanị na m ga-ewere aka nri, m ga-agbakwunye na ndọrọ ndọrọ ọchịchị site n'aka ekpe dịkwa njọ. Ebe ọ bụ na President Obama bụ obere ọnụ, akpọrọ ọtụtụ ndị nọ n'aka nri dị ka ndị na-akpa oke agbụrụ n'ihi na ha ekwenyeghị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya. Nke ahụ bụ ebubo siri ike ịgbachitere ebe ọ bụ na ọ pụtara na ị nweghị ike ikwenye Onye isi ala - maka ihe ọ bụla. Nke a bụ nwute ma na-aga n'ihu na-aga n'ihu site na ụfọdụ ndị isi aka ekpe. Ọ dị mkpa ka ọ kwụsị ebe ọ bụ na ọ naghị arụpụta ihe na iti mkpu ịkpa oke agbụrụ adịghị eme ihe ọ bụla iji nyere mba ahụ aka. Mana ọ bụ ụzọ dị irè isi kee ìgwè ehi ahụ!
Ndị Republican na-aga n'ihu na-agbagha ụtụ isi na ntinye nke mmemme na mmefu ọhụụ na mba a n'ihi na echiche ha bụ na anyị enweghị ike ịkwụ ụgwọ ya. Ọgba aghara na Gris na mba ndị ọzọ esenidụt ndị amalitere n'ihi ịbelata mmemme ikike gọọmentị kwesịrị ịmasị onye ọ bụla. Mana esemokwu si n'aka ekpe na-alọghachi mgbe niile "ị na-eche banyere ndị mmadụ ka ọ bụ na ị chọghị?" Ọ bụrụ n’ịchọrọ ibelata mmemme, ị naghị echebara ndị mmadụ echiche. Ma mgbe ego gwụchara anyị, onye na-enyere aka? Dị ka o kwesịrị ịdị, mkparịta ụka ahụ na-akpali iji nweta ego ọzọ (aka: share share). A na-ekewa ìgwè ehi.
Ana m agbali igbochi nkwenkwe nke m na post, ma na-agwa ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị anyị okwu ma jiri otu ehi. Nke dị njọ karịa ịgha ụgha - ma ọ bụ ihe ọjọọ na-ezighị ezi - bụ otú ìgwè ehi na-awakpo ndị na-abụghị ya. M ekwe nkwa na m ga-a ole na ole mkpari kwuru banyere nke a post site n'otu akụkụ ma ọ bụ nke ọzọ. Mgbe ìgwè ehi ahụ na-awakpo ya, ọ na-egbu mgbu nke ukwuu ma ike ma ọ bụ ụjọ nke ọgụ ahụ nwere ike ịmegharị ìgwè ehi ahụ n'ụzọ na-ezighi ezi. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ezere ìgwè ehi site n'ikwu ihe ọ bụla ma ọlị. Echeghị m na nke ahụ bụ ezigbo echiche. Anyị nwere ike ịkọwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ arụrụala ọ bụla n'akụkọ ihe mere eme - n'agbanyeghị agha ma ọ bụ azụmahịa, ọ na-abịakwutekwa onye ndu a tụkwasịrị obi nke na-ezighi ezi na otu ìgwè na-esochi anya n'ihi ụjọ ma ọ bụ amaghị ihe. Otu ìgwè ehi ebutela Agha Worldwa na akụnụba akụ na ụba.
Ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ịhụ ihe atụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọzọ nke a na izu ndị na-adịbeghị anya, ị ga-achọ naanị Ron Paul na ọgwụgwọ ya site na mgbasa ozi na akụkụ aka nri. Ọ bụrụ na Paul merie Iowa, M nụrụ na abụọ bụ isi na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-ekwu na ọ “na-etinye iwu ziri ezi nke Iowa caucus n'ime ajụjụ“. Echere m na nke ahụ pụtara na Iowa abụkwaghị akụkụ nke ìgwè ehi anyị na-akpọ "United States".
Chaị… n'ezie? Yabụ ọ bụrụ na imirikiti ndị isi ndọrọ ndọrọ ọchịchị ekwenyeghị n'ọtụtụ ndị nhoputa ndi ochichi, nsogbu abụghị echiche ha… ọ bụ na ndị mmadụ dara oke ọnụ ime mkpebi dị mma? Ron Paul na-aga n'ihu na-akpọ ya ezighị ezi na ọtụtụ n'ígwé… ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ihe akaebe na-akwado echiche ya na ndekọ ndekọ votu. Ma ìgwè ehi ahụ adịghị amasị Ron Paul. Ọ bụ onye si mba ofesi na ndị isi nke ìgwè ehi na-eme ihe niile kwere omume iji lie ya ngwa ngwa o kwere mee.
Ihe atụ ọzọ na ntuli aka a bụ ntuli aka m hụrụ ebe naanị 6% nke ndị ntuli aka na-achọghị mgbanwe kwuru na Donald Trump ga-emetụta votu ha. Elere m ụlọ ọrụ mgbasa ozi abụọ dị iche iche ma gbasasịa ụda site na nsonaazụ ntuli aka ahụ. Mana ọ bụrụ na ịkwụsị ma chee maka ya, 6% bụ nnukwu mmetụta. Otutu ndi isi oche enweela mmeri ma tufuo ihe na-erughị nke ahụ! Otú ọ dị, ìgwè ehi ahụ achọghị ka ihe mkpuchi na-eme ka ọ dị elu… n'ihi ya, ịgwagbu ntuli aka bụ nhọrọ kachasị adaba.
Mgbe m na-ekwu okwu banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị mmadụ (aka ìgwè ehi), ana m anụkarị, “Ọ bụ ezigbo ọkà okwu!” ma ọ bụ “Ọ bụ oghere **!” ka m na-ekwu maka Onye isi ala ugbu a na ndị ga-azọ ndị Republican. Ozugbo m nụrụ okwu ndị dị otú ahụ, ọ na-amakarị m iwe n'ihi na ọ na-egosi enweghị nghọta dị n'okwu a… mba anyị ga-eme nke ọma karịa ma ọ bụ n'okpuru ndu onye ahụ. Enwere m ike ilezi anya otu ọkà okwu ha dịruru irè ma enwere m ike inwe olile anya maka oghere ** ọzọ. Oge ụfọdụ ** oghere na-arụ ọrụ karịa.
Nke ikpeazu: Papa m na mama m gara nso kwuo banyere ha nchekwa ọha. Ha arụsi ọrụ ike na ndụ ha niile - mgbe ụfọdụ nne na nna m rụrụ ọtụtụ ọrụ. Papa m lara ezumike nká n'ọdụ ụgbọ mmiri ndị agha. Ha abụọ lara ezumike nká ma na-anakọta nchekwa nchekwa ọha. M chetaara ha ihe kpatara anyị ji nwee nchedo mmekọrịta na otu sistemu ahụ siri rụọ ọrụ n’oge ahụ… yana ndọtị ndụ na ndị chọrọ sistemu ahụ. Nne na nna m bụ ndị na-achọghị mgbanwe ma na-eme ihe n'eziokwu… ha chere na ha tinyere na sistemụ ma na- isiokwu iji nweta ugwo ha. Nke ahụ mara mma na-achịkọta etu ìgwè ehi ahụ si eche na otu ìgwè ehi ahụ si emeghachi omume n'okwu ọ bụla nke igbutu nchedo mmekọrịta mmadụ na ibe ya - n'agbanyeghị ma ọ dị mkpa iji hụ na solvency nke usoro.
Ọ ga-amasị gị iche n'echiche na a ga-ekpughere ndị ndu hiere ụzọ na amamihe nke ìgwè ehi. N’ezie, enweghị m okwukwe ọbụla ga-eme. Reality telivishọn na-achịkwa ikuku, ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ American Idol karịa na ntuli aka ahụ, ìgwè ehi na-aga n'ihu na-ahọrọ maka ọdịmma onwe ha nke dị mkpirikpi kama ịbụ ihe dị mma maka ìgwè ehi ahụ. Na ọrụ m dị ka a marketer, M na-arụ ọrụ maka crappy ụlọ ọrụ ndị na-ike na kediegwu ụlọ ọrụ na-adọga.
Ọ bụ ihe nwute (ma ọ bụ ihe ndabara nye ụfọdụ) na eziokwu anaghị egbochi echiche nke echiche. Ma mgbe echiche a dịgidere n'ofe ìgwè ehi, ọ na-esikwu ike. Ijigide ikike ahụ bụ akụkụ nke ọrụ m dị ka onye na-ere ahịa. Anyị na-echekarị gbasara omume nke ìgwè ehi ugbu a wee wepụta usoro ga-enyere anyị aka ịmata ọdịmma nke anụ ụlọ anyị maka uru ndị ahịa anyị. Echere m na ọ na-eme m akụkụ nke nsogbu ahụ.
Tags: Nhọrọ 2011ntuli akaìgwè ehiObamaron paulebo